Iberibe ọbọgwụ - Goodao Technology Co., Ltd.
Ahịhịa ọbọgwụ kpọrọ nkụ
Ọbọgwụ Duck bụ nri nkịta eke sitere na anụ ọbọgwụ. Anyị shọta ọbọgwụ dị elu ara anụ dị ka ahịrị ihe, jiri ala okpomọkụ dehydrate na ikuku akọrọ usoro ka dowe nri. A na -ahụta ụdị anụ ahụ nke ọma na anụ nwere njiri mara ụtọ na isi na -esi ike mgbe emepere ya. Ọ nwere mgbakwunye-nri maka nkịta na kwa na -enyere aka iti ume ọjọọ. Ngwaahịa uche ọbụghị nweta ọgba aghara mgbe ọnya, nke pụtara na e nwere no ntụ ntụ.
Ibu nkịta (n'arọ)
Ntị: A na -eme ngwaahịa a site na anụ a asara n'ọkụ nke nwere mmiri dị ala, a na -atụ aro ka ọ bee n'ime obere iberibe mgbe ị na -enye obere nkịta nri.
Protein Crube: 30%min
Abụba Crube: 7% kacha
Fiber Crube: 4% kacha
Ntụ: 5% max
Mmiri: 20% max
Aha ngwaahịa Ọbọgwụ Duck
Ngwaahịa bụ isi ihe Ọbọgwụ
Ezi ezigbo ntụkwasị obi na ezigbo kredit dị mma bụ ụkpụrụ anyị, nke ga-enyere anyị aka n'ọkwá dị elu. N'ịgbaso ụkpụrụ gị nke “ịdị mma nke mbụ, onye na -azụ ihe kacha elu” maka onye na -emepụta OEM China Pet Food Manufacturer Lamb | Anụ | Ngwọta Nkịta ọkụkọ, Ọ bụrụ na ị nwere ihe ọ bụla gbasara ụlọ ọrụ anyị ma ọ bụ ngwaahịa na azịza, jide n'aka na ị nweere onwe gị n'efu. gwa anyị okwu, enwere ike nwee ekele dị ukwuu maka akwụkwọ ozi gị na -abịa.
Ndị na -emepụta OEM China Dog na -eme ọgwụgwọ na ọnụahịa nri nkịta, na -ewere echiche bụ isi nke "ịbụ onye ọrụ." Anyị ga -ejikọ aka na ọha mmadụ maka ngwa ahịa dị elu yana ezigbo ọrụ. Anyị ga-ebute ụzọ isonye na asọmpi mba ụwa ịbụ onye nrụpụta klaasị mbụ na ngwaahịa a n'ụwa.
Nke gara aga: Akọrọ Duck Jerky
Osote: Ọbọgwụ kechie rawhide stick
Ọbọgwụ ọbọgwụ maka nkịta
Ntị Bọcha Bịachị na Chicken